CAD for Myanmar: TT-01: နောက်မှာပုန်းနေတဲ့ System Variables တွေ . . .
TT-01: နောက်မှာပုန်းနေတဲ့ System Variables တွေ . . .
ကျနော်တို့ အသုံးချနေတဲ့ AutoCAD ဟာ သူ့ရဲ့ Default Settings တွေ။ ကျနော်တို့ အသုံးချနေရင်း၊ ဆွဲနေရင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို သူ့ရဲ့ Database ထဲမှာ မှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကိုကျနော်တို့က သိမှလည်း AutoCAD ကိုကောင်းကောင်း အသုံးချတတ်မှာပါ။ ဒါတွေကို ဘယ်လို ကြည့်လို့ရနိုင်သလဲဆိုတော့ . . . Command Line မှာ SETVAR (Set Variable) လို့ ရိုက်ပြီး (Enter) ခေါက်လိုက်ပါ။
Command: SETVAR (Enter)
Enter variable name or [?] ? (Enter)
Enter variable(s) to list <*>: (Enter)
ဆိုရင် System Variables တွေ စတွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီကဆက်ပြီး
Press ENTER to continue: လို့ ပြောတဲ့အတွက် Enter ခေါက်၊ ခေါက်ပြီး လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အကုန်ပေါ့။ စိတ်မရှည်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ရှာနေတာ တွေ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Command Line ကိုပြန်ထွက်ချင်ရင် Escape Key (Esc) သာနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျား။
Enter variable name or [?]: မှာကိုယ်က သိတဲ့ Variable ကို ရိုက်ထဲ့ပြီး ရှာလို့လဲ ရပါတယ်။ ဥပမာ - AREA, LASTPOINT, CIRCLERAD . . . လို မျိုးတွေပေါ့။ အခုတော့ ဘာတွေရှိမှန်းမသိလို့ ? ပဲနှိပ်ပြီးကြည့်တာပါ။ တခါဝင်ဖူး ထားရင် အဲဒါဟာ နောက်တခါမှာ Default အနေနဲ့ < …> ကြားထဲမှာ မြင်နေရပါလိမ့်မယ်။
Enter variable(s) to list <*>:
? & * က wildcard characters ဆိုတော့ အလိုရှိသလို ရှာနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ? က one character ကို ကိုယ်စားပြုပြီး * ကတော့ words or any group of characters ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဥပမာ - b* ဆိုရှာရင် bနဲ့ “စ”တာတွေချည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်။ att??? နဲ့ရှာရင် ATTDIA, ATTIPE, ATTREQ သုံးခုတွေ့ရမယ်။ ဒီလောက်ဆို ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး သုံးပါလေလို့ပဲ ပြောပါရစေတော့ . . . ။
ကဲ . . . တွေ့တာတွေကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဘယ်ဟာက ဘာတွေလဲ သိချင်နေမှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဘယ် Variable နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ သူမှတ်ထားတာ ဘာတွေပါလို့ပဲ တွေ့နေရတာကိုး။ ဘယ်ကျေနပ်ပါ့မလဲ။ လေ့လာပါတယ်ဆိုမှ . . . ။ မကျေနပ်ရင် SYSVDLG (System Variable Dialog) လို့ Command Line မှာ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ကျနော်အောက်မှာ ပြထားသလို Dialog Box လေးတွေ့မှာပါနော်။
ကဲ အခုတော့ ဘယ် Variable ကဘာပါ။ ဘာကို ဘယ်လိုမှတ်ထားတာပါ။ တွေ့ရပြီမဟုတ်လား။ သိနားလည်ရင် ကိုယ်ကြိုက်သလို ဒီနေရာကနေ ပြင်လို့ရပါတယ်။ ဘုရား . . . ဘုရား . . . ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ ကျနော် ဒီနေရာမှာ မရှင်းနိုင်ပါဘူးဗျာ။ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါ . . . ။ ဒီနေရာကနေ “Save All …” နဲ့ Variable List ကို Export လုပ်လို့ရပါတယ်။ Extension .SVF နဲ့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Notepad နဲ့တောင် လွယ်လွယ်လေး ဖွင့်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒီ System Variable File ကိုတခြားတနေရာမှာ သုံးချင်ရင် “Read ...” နဲ့ပြန် Import လုပ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို နောက်ကွယ်က ပုန်းရှိုး၊ ကွယ်ရှိုးလုပ်နေတဲ့ System Variables တွေကို လေ့လာလို့ ရနိုင်ပြီပေါ့နော် . . . ။
Posted by WISE GUY at 6:05 PM